Kuyaziwa nenzuzo ukuhlanzwa izakhiwo apula. Kodwa abantu abaziyo ukuthi umkhiqizo ezifana elula efana apple cider uviniga is kabanzi esetshenziselwa ukwenza umuthi. Lokhu kungenxa yokuthi iqukethe eziningi izinto enempilo: i-phosphorus, i-sodium, calcium, ithusi, insimbi, citric, acidosis, oxalic, malic acid nezinye izinto ezibalulekile. Uviniga ithole isicelo yayo Cosmetology wezokwelapha njengoba ikhambi for cellulite, izibazi, anti varicose emithanjeni, kanye nezinye izinkinga.
Wonke umuntu wesifazane, wathola emzimbeni wakhe lulandela "orange ikhasi", uqala ukuzizwa kokungapheleli kwakhe siqu, futhi wonke amabutho abafisa ukubabulala enkingeni Kuvezwe, efuna zonke izinhlobo izindlela ukuze silwe cellulite. Ukuxazulula le nkinga, kufanele sinake inhlangano efanele futhi ukudla okunempilo, kanye ukukhetha akwamukeleki kibo izindlela zangaphandle umthelela cellulite. Namuhla, inani elandayo abesifazane, nalapho ebhekene nale nkinga, cabanga of apple cider uviniga cellulite izindlela eziphumelela kakhulu. Isetshenziselwa njengoba amafutha cindezela, ukugoqa, massage. Ngaphezu kwalokho, apple cider uviniga kusuka cellulitis efanelekayo bezihlikihla ezindaweni inkinga emzimbeni.
Ungadliwa for ukwelashwa cellulite
Ukuze ofeza kwemibhalo kufanele buhlanjululwe olinganise ofanayo, uviniga namanzi. Lolu ketshezi okuholela kwaba engeza amaconsi ambalwa "Ukupholisa" amafutha abalulekile (bergamot, zikagamthilini, peppermint).
Ukusebenzisa apple cider uviniga kusuka cellulite, ungakwazi lungiselela namafutha massage. Ngenxa yalesi uviniga kufanele buhlanjululwe ngamafutha ukubhucunga Ingxenye 1 kuya 3. Ingxube kwaphumela ungeze uwoyela ether ezisawolintshi kancane (ubhamubhamu, orange, Mandarin). Uhlikihla kabili ngesonto, kuyancomeka ukuba afeze.
Ukugaya cellulite abathintekayo izindawo isikhumba kutuswa ukusebenzisa iresiphi elandelayo: 2 wezipuni apple cider uviniga, hlambulula nge 200 amagremu yamanzi. Thola imali massage ukunyakaza bakuthinte izindawo inkinga zomzimba.
Apple uviniga cellulite futhi wabasebenzisa njengezinceku cindezela. Ukuze lokhu Ikhambi Ngaleso elifakwe gauze cider uviniga buhlanjululwe ngamanzi ngokulingana 1 kuya 1 ne ukwengeza uwoyela bergamot, zikagamthilini, noma Mint. I gauze isetshenziswa ezindaweni ehlaselwe cellulite kanye ifilimu zihambisana. Cindezela esongwe ngengubo yokulala efudumele ihora elingu-1. Ngemva kokususa cindezela ingxube siyakazwe, ngemva kwalokho kuthambisa isikhumba ukhilimu okunomsoco.
Sekuyisikhathi eside waphawula ukuthi uviniga apula cider ne emithanjeni varicose akuzona kuphela lokukwazi ukwelapha isifo okuqhubekayo, kodwa futhi ukuvimbela okuvela kuyo lesi sifo.
Ukuze ekwelapheni varicose emithanjeni usebenzisa lokhu okulandelayo izindlela cider uviniga.
Kanye ngosuku, ukwenza ngokwakho unyawo okugeza. Bath kufanele igcwaliswe ngamanzi afudumele ne ukwengeza 0.5 amalitha apple cider uviniga, ukuze iphuzu on the imilenze lapho varicose emithanjeni yavela. Imizuzu emihlanu ubambe izinyawo emanzini, bese, ngaphandle esesula kubo, amanga phezu flat futhi uphakamise imilenze up. Lay kuze kube ketshezi ngeke obsohnet.
Sebenzisa Ukugoqa indlela, ngoba ukuthi uviniga apula cider cwilisa indwangu. Namathisela indwangu endaweni obuhlungu, phezulu, bopha i oilcloth futhi bopha ithawula. Imilenze phakamisa bese ubamba kulesi sikhundla imizuzu 20-30. Inqubo Kunconywa izikhathi 2 ngosuku, okungcono kusihlwa futhi ekuseni.
ewusizo kakhulu apple cider uviniga AMANXEBA, okuyinto eyaba imbangela amathumba, induna, nezinduna. Ukuze ekwelapheni izibazi kufanele Sula ubuso izindlela ehlanganisa apple cider uviniga namanzi endaweni isilinganiso 1 kuya 3. Ithuluzi kungenziwa iqandiswe isikhunta esikhethekile ice neqhwa ngezikhathi esesula ezindaweni ezithintekile. Ngenxa yamakhaza kwandisa kwegazi futhi ngaleyo ndlela inqubo ukuphulukiswa kwabantu okwenziwa namuhla isheshe.
Umtholampilo SDM ihlaziya: kuzibuyekezo, izintengo
Popular veterinaries (Izhevsk)
Cute umnenke tilde kuyogxilisa inhliziyo yakho
Yini esetshenziswa TIG Welding apharathasi